EDM ပွဲတွေမှာ အထာကျနေစေမယ့် အလန်းစား မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်များ - For her Myanmar
EDM ပွဲတွေမှာ အထာကျနေစေမယ့် အလန်းစား မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်များ
လွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်ပြင်ပြီး ပွဲတက်ကြမယ် အိုးးးးရေ့
ကဲ …နှစ်သစ်မှာ အသစ်အသစ်သော EDM ပွဲတွေလာတော့မယ်နော်။ ဆိုတော့ကား ပွဲသွားမယ့် ယောင်းတို့အတွက် ပွဲထဲမှာ အထူးခြားဆုံး၊ အလန်းဆုံးဖြစ်နေစေဖို့ ဒီမိတ်ကပ် အပြင်အဆင်လေးတွေကို အချိန်မီရှာဖွေ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်လို့။
မြစိမ်းရောင် ဘလင်းဘလင်း မျက်ဝန်းတစ်စုံ
ပါတီပွဲမှာ ထင်းခနဲဖြစ်နေစေဖို့ တောက်ပတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစုံ ဒါမှမဟုတ် မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့တင် ပြီးပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတာ ဟောလိဝုဒ် မင်းသမီးချောလေး (Megan ရဲ့ အသည်းတစ်ယောက်) ဖြစ်တဲ့ Lucy Hale ရဲ့  look ကို ကြည့်တာနဲ့တင် သိနိုင်ပါတယ်နော်။ မြစိမ်းရောင် (Emerald) မျက်လုံးမိတ်ကပ်နဲ့ Nude (အသားရောင်) နှုတ်ခမ်းတစ်စုံနဲ့ဆို ဘယ်လောက်တောင် မိမိုက်နေလဲလို့။
အရမ်းထင်းထင်းကြီး ဖြစ်မနေဘဲ Glitter (အလက်အမှုန်လေးတွေ) ပါတဲ့ အညိုရောင်အိုင်းရှဲဒိုးလ်လေးနဲ့ ခပ်ထင်းထင်းချောကလက်ရောင် နှုတ်ခမ်းတစ်စုံ ကတော့ အသားဖြူသူရော ညိုသူပါ လိုက်ဖက်နိုင်တဲ့ ပါတီမိတ်ကပ်အပြင်အဆင် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော့်။
Related Article >>> ငွေ ၅၀၀၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းအစုံ အက်ဒ်မင်ဘယ်လိုဝယ်လဲ ?
ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက် နဲ့ အနီရောင်ဆိုတာ ခွဲမရတဲ့ အမွှာပါနော်။ အနီဖျော့ဖျော့ Shimmer (ပုလဲပြောင်) အနည်းငယ်ပါတဲ့ အိုင်းရှဲဒိုးလ်ရယ်၊ အနီဘက်သွားတဲ့ ပါးနီခပ်ရဲရဲလေးရယ်၊ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ တက်ကြွတဲ့ အသွင်ဆောင်တဲ့ အနီရောင်နှုတ်ခမ်းသားလေးရယ် ဆို … အိုး … လုံးဝကို နတ်မိမယ်လေးပဲနော်။
ကိုယ်က အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနဲ့ တောက်ပတဲ့ ဘလင်းဘလင်း မျက်လုံးပြင်ပုံတွေ မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ ပုံမှာပါတဲ့ နိုင်ငံကျော် Victoria’s Secret Brand ရဲ့  နတ်သမီး (Angel) တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် Sports Illustrated Swimsuit Issue (အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း) ရဲ့မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lily Aldridge ပြင်ထားတဲ့ ဒီမိတ်ကပ် look ကို ပြင်နိုင်ပါတယ်။ Cat Eye (ကြောင်မျက်လုံးပုံစံ) လိုင်နာကို ခပ်နက်နက် ဆွဲထားပြီး ခပ်ဖျော့ဖျော့ Nude (အသားရောင်) နှုတ်ခမ်းနီ နဲ့ဆို အထာကျကျ လန်းနေမှာ အသေချာပဲလေ။
ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ Lily Collins (Megan အသည်းနောက်တစ်ယောက် :P) ကို မိတ်ကပ်ပညာရှင် Fiona Stiles က ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး လုံးဝကို Dramatic (ပွဲတက်အပြင်အဆင်) မျိုးဖြစ်နေအောင် Smoky Eyes (ခပ်မှိုင်းမှိုင်းမျက်လုံးခြယ်သတဲ့ပုံစံ) ခပ်ထင်းထင်းနဲ့ ပြင်ဆင်ခြယ်သထားပါတယ်။ Bold (ထင်း) နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် နှုတ်ခမ်းကိုတော့ ခပ်ဖျော့ဖျော့အသားရောင်လေး ဆိုးပေးထားပါတယ်။ ဒီ မိတ်ကပ် Look ကပေါ်တာ ကြာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားနိုင်မယ့်ပုံစံ ဖြစ်တာကိုတော့ ငြင်းလို့မရဘူးမလား။
လိမ္မော်ရောင် နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ အသားရောင်မျက်လုံးရှဲဒိုး
ဒီ မိတ်ကပ် Look ကတော့ လုံးဝကို ညှို့အားပြင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ ရွှေရောင်နဲ့ အညိုရောင် အိုင်းရှဲဒိုးကို ရောစပ်ခြယ်သထားပြီး အုတ်ကျိုးမကျ လိမ္မော်မကျ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ လှချင်တိုင်းလှနေတာကတော့ မင်းသမီးချော Jennifer Lawrence ပါ။ ပွဲတီပွဲမှာ ကိုယ်ကြိတ်ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးပါ လာမယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီး မစဉ်းစားနဲ့။ ဒီ look နဲ့ ဆို ကြွေဆင်းသွားမှာ ယုံ။ 😉
Related Article >>> မျက်လုံးခြယ်ရတာ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ယောင်းတို့အတွက် အခြေခံအိုင်းရှဲဒိုးအချက် (၈) ချက်
အေးချမ်းတဲ့ ငွေရောင် (သို့) စိမ်းကားတဲ့ ငွေရောင်
ခပ်မိုက်မိုက် ခပ်ချေချေ လေဒီအသွင် ဖြစ်ချင်တာဆိုရင်တော့ အနီရောင်မသုံးဘဲ တောက်ပစူးရဲတဲ့ အကြည့်နဲ့ Gigi Hadid ရဲ့  ဒီမိတ်ကပ် Look ကိုရွေးလိုက်ပါ။ အသားရောင်နှုတ်ခမ်းနီ, နှင်းမှုန်လေးတွေလို ငွေရောင် အိုင်းရှဲဒိုးနဲ့ မျက်ဝန်း၊ စိုပြည်တဲ့ အသားရေပုံစံမိတ်ကပ် အပြင်အဆင်နဲ့ဆို လုံးဝကို ပြည့်စုံသွားမှာနော်!!!!!!!
ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားတဲ့ Red Lips (အနီရောင်နှုတ်ခမ်း)
“When in doubt, wear RED” (ဘယ်လိုပြင်လို့ပြင်ရမှန်းမသိရင် အနီရောင်ကိုသာရွေးချယ်ပါ။) ဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်းပဲ။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ စိတ်ရှုပ်လာရင်တော့ အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီလေးသာ ကောက်ဆိုးလိုက်ပါ။ ပွဲသွားခါနီး ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်သိပ်မရတော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ပြင်နေကျ Daily Look (ထသွားထလာ) ပုံစံမျိုးကိုပဲ အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီ ရဲရဲလေးသာ ကောက်ဆိုးပလိုက်။ Aquaman ရဲ့ မင်းသမီးလေး Amber Heard (Megan အသည်းပဲ သူလည်း :D) လိုမျိုး ကျက်သရေရှိရှိ နဲ့ ကြည့်မဝကို လှနေမှာပါ ယောင်းတို့ရေ။
ဒါဆိုရင်တော့ ပါတီပွဲတွေမှာ လှနေဖို့ ရယ်ဒီဖြစ်နေမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘယ်ဟာလေးက ယောင်းတို့ရဲ့  အကြိုက်ဆုံးမိတ်ကပ်အပြင်အဆင်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးခဲ့ဦးနော်။
နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ လို့….
ဓာတ်ပုံအသုံးပြုခွင့် ပေးပါသော ညီမလေး Rosella May အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Megan (For Her Myanmar)
လှယျလှယျနဲ့မွနျမွနျပွငျပွီး ပှဲတကျကွမယျ အိုးးးးရေ့
ကဲ …နှဈသဈမှာ အသဈအသဈသော EDM ပှဲတှလောတော့မယျနျော။ ဆိုတော့ကား ပှဲသှားမယျ့ ယောငျးတို့အတှကျ ပှဲထဲမှာ အထူးခွားဆုံး၊ အလနျးဆုံးဖွဈနစေဖေို့ ဒီမိတျကပျ အပွငျအဆငျလေးတှကေို အခြိနျမီရှာဖှေ ရေးသားပေးလိုကျပါတယျလို့။
မွစိမျးရောငျ ဘလငျးဘလငျး မကျြဝနျးတဈစုံ
ပါတီပှဲမှာ ထငျးခနဲဖွဈနစေဖေို့ တောကျပတဲ့ နှုတျခမျးတစုံ ဒါမှမဟုတျ မကျြဝနျးတဈစုံနဲ့တငျ ပွီးပွညျ့စုံနိုငျတယျဆိုတာ ဟောလိဝုဒျ မငျးသမီးခြောလေး (Megan ရဲ့အသညျးတဈယောကျ) ဖွဈတဲ့ Lucy Hale ရဲ့ look ကို ကွညျ့တာနဲ့တငျ သိနိုငျပါတယျနျော။ မွစိမျးရောငျ (Emerald) မကျြလုံးမိတျကပျနဲ့ Nude (အသားရောငျ) နှုတျခမျးတဈစုံနဲ့ဆို ဘယျလောကျတောငျ မိမိုကျနလေဲလို့။
အရမျးထငျးထငျးကွီး ဖွဈမနဘေဲ Glitter (အလကျအမှုနျလေးတှေ) ပါတဲ့ အညိုရောငျအိုငျးရှဲဒိုးလျလေးနဲ့ ခပျထငျးထငျးခြောကလကျရောငျ နှုတျခမျးတဈစုံ ကတော့ အသားဖွူသူရော ညိုသူပါ လိုကျဖကျနိုငျတဲ့ ပါတီမိတျကပျအပွငျအဆငျ တဈခုဖွဈပါတယျနေျာ့။
Related Article >>> ငှေ ၅၀၀၀၀ ဝနျးကငျြနဲ့ မိတျကပျပစ်စညျးအစုံ အကျဒျမငျဘယျလိုဝယျလဲ ?
ဒီဇငျဘာပိတျရကျ နဲ့ အနီရောငျဆိုတာ ခှဲမရတဲ့ အမှာပါနျော။ အနီဖြော့ဖြော့ Shimmer (ပုလဲပွောငျ) အနညျးငယျပါတဲ့ အိုငျးရှဲဒိုးလျရယျ၊ အနီဘကျသှားတဲ့ ပါးနီခပျရဲရဲလေးရယျ၊ ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ တကျကွှတဲ့ အသှငျဆောငျတဲ့ အနီရောငျနှုတျခမျးသားလေးရယျ ဆို … အိုး … လုံးဝကို နတျမိမယျလေးပဲနျော။
ကိုယျက အနီရောငျနှုတျခမျးနဲ့ တောကျပတဲ့ ဘလငျးဘလငျး မကျြလုံးပွငျပုံတှေ မကွိုကျဘူးဆိုရငျတော့ ပုံမှာပါတဲ့ နိုငျငံကြျော Victoria’s Secret Brand ရဲ့ နတျသမီး (Angel) တဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ Sports Illustrated Swimsuit Issue (အှနျလိုငျးမဂ်ဂဇငျး) ရဲ့မျောဒယျလျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Lily Aldridge ပွငျထားတဲ့ ဒီမိတျကပျ look ကို ပွငျနိုငျပါတယျ။ Cat Eye (ကွောငျမကျြလုံးပုံစံ) လိုငျနာကို ခပျနကျနကျ ဆှဲထားပွီး ခပျဖြော့ဖြော့ Nude (အသားရောငျ) နှုတျခမျးနီ နဲ့ဆို အထာကကြ လနျးနမှော အသခြောပဲလေ။
ခဈြစရာကောငျးလှတဲ့ Lily Collins (Megan အသညျးနောကျတဈယောကျ :P) ကို မိတျကပျပညာရှငျ Fiona Stiles က ဆှဲဆောငျမှုရှိပွီး လုံးဝကို Dramatic (ပှဲတကျအပွငျအဆငျ) မြိုးဖွဈနအေောငျ Smoky Eyes (ခပျမှိုငျးမှိုငျးမကျြလုံးခွယျသတဲ့ပုံစံ) ခပျထငျးထငျးနဲ့ ပွငျဆငျခွယျသထားပါတယျ။ Bold (ထငျး) နတေဲ့မကျြလုံးနဲ့ လိုကျဖကျအောငျ နှုတျခမျးကိုတော့ ခပျဖြော့ဖြော့ အသားရောငျလေး ဆိုးပေးထားပါတယျ။ ဒီ မိတျကပျ Look ကပျေါတာ ကွာနပွေီဖွဈပမေဲ့ ဘယျတော့မှ ရိုးမသှားနိုငျမယျ့ပုံစံ ဖွဈတာကိုတော့ ငွငျးလို့မရဘူးမလား။
လိမ်မျောရောငျ နှုတျခမျးလေးနဲ့ အသားရောငျမကျြလုံးရှဲဒိုး
ဒီ မိတျကပျ Look ကတော့ လုံးဝကို ညှို့အားပွငျးတဲ့ ပုံစံမြိုးပါ။ ရှရေောငျနဲ့ အညိုရောငျ အိုငျးရှဲဒိုးကို ရောစပျခွယျသထားပွီး အုတျကြိုးမကြ လိမ်မျောမကြ နှုတျခမျးလေးနဲ့ လှခငျြတိုငျးလှနတောကတော့ မငျးသမီးခြော Jennifer Lawrence ပါ။ ပှဲတီပှဲမှာ ကိုယျကွိတျကွိုကျနတေဲ့ ကောငျလေးပါ လာမယျဆိုရငျတော့ အမြားကွီး မစဉျးစားနဲ့။ ဒီ look နဲ့ ဆို ကွှဆေငျးသှားမှာ ယုံ။ 😉
Related Article >>> မကျြလုံးခွယျရတာ အခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ အခွခေံအိုငျးရှဲဒိုးအခကျြ (၈) ခကျြ
အေးခမျြးတဲ့ ငှရေောငျ (သို့) စိမျးကားတဲ့ ငှရေောငျ
ခပျမိုကျမိုကျ ခပျခခြေေ လဒေီအသှငျ ဖွဈခငျြတာဆိုရငျတော့ အနီရောငျမသုံးဘဲ တောကျပစူးရဲတဲ့ အကွညျ့နဲ့ Gigi Hadid ရဲ့ ဒီမိတျကပျ Look ကိုရှေးလိုကျပါ။ အသားရောငျနှုတျခမျးနီ, နှငျးမှုနျလေးတှလေို ငှရေောငျ အိုငျးရှဲဒိုးနဲ့ မကျြဝနျး၊ စိုပွညျတဲ့ အသားရပေုံစံမိတျကပျ အပွငျအဆငျနဲ့ဆို လုံးဝကို ပွညျ့စုံသှားမှာနျော!!!!!!!
ဘယျတော့မှ ရိုးမသှားတဲ့ Red Lips (အနီရောငျနှုတျခမျး)
“When in doubt, wear RED” (ဘယျလိုပွငျလို့ပွငျရမှနျးမသိရငျ အနီရောငျကိုသာရှေးခယျြပါ။) ဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုငျးပဲ။ ဘာလုပျရမှနျးမသိ စိတျရှုပျလာရငျတော့ အနီရောငျနှုတျခမျးနီလေးသာ ကောကျဆိုးလိုကျပါ။ ပှဲသှားခါနီး ပွငျဆငျဖို့ အခြိနျသိပျမရတော့ဘူး ဆိုရငျတော့ ပွငျနကြေ Daily Look (ထသှားထလာ) ပုံစံမြိုးကိုပဲ အနီရောငျနှုတျခမျးနီ ရဲရဲလေးသာ ကောကျဆိုးပလိုကျ။ Aquaman ရဲ့မငျးသမီးလေး Amber Heard (Megan အသညျးပဲ သူလညျး :D) လိုမြိုး ကကျြသရရှေိရှိ နဲ့ ကွညျ့မဝကို လှနမှောပါ ယောငျးတို့ရေ။
ဒါဆိုရငျတော့ ပါတီပှဲတှမှော လှနဖေို့ ရယျဒီဖွဈနမေယျ ထငျပါတယျ။ ဘယျဟာလေးက ယောငျးတို့ရဲ့ အကွိုကျဆုံးမိတျကပျအပွငျအဆငျလဲဆိုတာ ပွောပွပေးခဲ့ဦးနျော။
နှဈသဈမှာ စိတျသဈလူသဈနဲ့ ကနျြးမာပြျောရှငျကွပါစေ လို့။
ဓာတျပုံအသုံးပွုခှငျ့ ပေးပါသော ညီမလေး Rosella May အား အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
Tags: bling, easy, EDM, looks, makeup, parties, quick
၂၀၁၉ အတွင်း အသစ်ထွက်ရှိလာမည့် နိုင်ငံတကာဇာတ်ကားများ
ဒီအလှပြင်ပစ္စည်း (၇) မျိုးကို ပိုက်ဆံသပ်သပ် အကုန်ခံပြီး မဝယ်ပါနဲ့
Megan January 3, 2019
ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမယ့် (၅) မိနစ်စာ ယောဂကျင့်စဉ်
ရွှန်းစိုတဲ့နှုတ်ခမ်းတစ်စုံပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဂရုတစိုက်လုပ်ပေးရမယ့် အချက်(၆)ချက်